खेलकूद Archives - Page5of 11 - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! खेलकूद
साफ फुटवल : आज नेपाल भर्सेस भारत
काठमाडौं, पुस १८ । चौथो साफ च्याम्पियनसिप महिला फुटवलको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपालले सोमबार भारतसँग खेल्दैछ । भारतको सिलिगुडीमा रहेको कञ्चनजंगा स्टेडियममा खेल दिउँसो सवा २ बजेपछि सुरु हुनेछ ।
साफ च्याम्पियनसिपका यसअघिका तीनवटै संस्करणको फाइनल खेलेका नेपाल र भारत यसपटक सेमिफाइनलमै खेल्न लागेका......
पदक बिजेता दिपेशको डडेल्धुरामा भव्य स्वागत2weeks ago
बिरेन्द्र जैरु/सुदूर खबर
डडेल्धुरा, पुस १७ । भर्खरै पुर्वाञ्चलमा सम्पन्न साताँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका पदक विजेता दिपेश किशोर आलेलाई डडेल्धुरामा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
सेपाक ताक्रोमा कास्य पदक बिजेता खेलाडी आलेलाई गृह जिल्लामा नगरपरिक्रमा सहित स्वागत गरिएको हो ।उनको स्वागतमा......
साफ महिला फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने
काठमाडौं, पुस १७ । भारतको सिलगुडीमा जारी महिला साफ च्याम्पियनसीपको सेमिफाइनलमा नेपालले भारतको सामना गर्ने भएको छ ।
यसअघि लगातार तीन पटक नेपाल र भारतबीच फाइनलमा भेट भएको थियो । त्यसमा तीनै पटक भारत विजयी भएको थियो ।
तर यसपटक भने समूह बी को अन्तिम खेलमा शनिबार आयोजक भारतलाई बंगलादेशले गोलरहित बराबरीमा......
अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित सुदूर पश्चिम खप्तड गोल्ड कप पुस २१ देखि
सुदूर खबर, कैलाली, पुस १६ । सुदूर पश्चिममा पहिलो पटक आगामी पुस २१ गतेदेखि माघ १ गते सम्म अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित सुदूर पश्चिम खप्तड गोल्ड कप– २०७३ हुने भएको छ । सुदूर पश्चिम ११ स्पोटर््स क्लबको आयोजनामा गोल्ड कप धनगढीमा हुनेछ ।
प्रतियोगीतामा नेपालका १० र भारतका २ गरि १२ क्लबहरु सहभागी हुने बताइएको छ ।......
सातौं राष्ट्रिय खेलकुद आज सकिँदै
सुनसरी, पुस १५ । सातौं राष्ट्रिय खेलकुद आज शुक्रबार सकिँदैछ । पूर्वाञ्चलमा खेलकुद सातौं विविधतामा रमाएर बाँचौं भन्ने नारासहित पुस ८ गते विराटनगरमा सुरु भएको प्रतियोगिताको समापन शुक्रबार धरानमा हुनेछ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रतियोगिताको समापन गर्ने कार्यक्रम छ । सातौ राष्ट्रिय......
नेपालले आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
काठमाडौं, पुस १५ । चौथो साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ ।
भारतको सिलगुढीस्थित कञ्चनजङ्घा रङ्गशालामा नेपालले विजय लक्ष्यका साथ शुक्रबार श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यस खेलबाट समूह ‘ए’ को विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ ।......
बिश्वकप क्रिकेटमा नेपाल, बाहिरियो यस्तो भिडियो- हेर्नुहोस् के यो सम्भव छ ?
बिश्वकप क्रिकेटमा नेपाल, बाहिरियो यस्तो भिडियो- हेर्नुहोस् के यो सम्भव छ......
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कसको पदक कति ?
काठमाडौं, पुस १४ । पूर्वाञ्चलमा जारी सातौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत विभागीय टोली नेपाल आर्मी अग्रज स्थानमा रहेको छ ।
आर्मीले जारी प्रतियोगितामा ९१ स्वर्ण, ५१ रजत तथा २१ कास्य गरेर कुल १ सय ६५ वटा पदक हात पारेको छ भने सशस्त्र प्रहरी ३२ स्वर्ण, २७ रजत र ४८ कास्यसहित १०७ पदकका साथ दोश्रो स्थानमा छ......
साफ फुटबल : नेपालले माल्दिभ्सलाई ९-० ले हरायो, कस्ले कति गोल हान्यो ?
काठमाडौं, पुस १३ । चौथो महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले माल्दिभ्सलाई ९–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । जितसँगै नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
भारतको सिलिगुडीमा रहेको कन्चनजंङ्गा रङ्गशालामा चलीरहेको खेलमा नेपालकी साबित्रा भण्डारीले ५ गोल गरिन् । उनले गएको सोमबार भुटानविरुद्ध पनि ५ गोल गरेकी......
इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलद्धारा स्टोक सिटी पराजित
काठमाडौं, पुस १३ । इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले स्टोक सिटीलाई पराजित गरेको छ । आफ्नै मैदान एन्फिल्डमा भएको खेलमा लिभरपुल ४-१ ले विजयी भएको हो ।
खेलमा लिभरपुललाई विजयी गराउन एडम लालाना, रोबर्टो फर्मीनो र ड्यानिएल स्टरीजले एक–एक गोल गरे । स्टोकका ईम्बुलाले एक आत्माघाति गोल गरेपछि लिभरपुल ४-१ ले......